Madheshvani : The voice of Madhesh - सप्तरीको लौनियाँमा २५ जनामा संक्रमण
सप्तरीको लौनियाँमा २५ जनामा संक्रमण
राजविराज, १९ साउन । सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा वडा नं. २ लौनियाँ टोलमा २५ जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ । यससँगै उक्त वार्डमा संक्रमितको संख्या ३१ पुगेको छ ।
तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको यस वडासँगै गाउँपालिकामा संक्रमितको संख्या ७९ पुगेको हो । गाउँपालिकामा आइतबार थपिएको २५ जना संक्रमितमध्ये लौनियाँ गाउँको कपाल काट्ने ठाकुर, चियानस्ता पसलका साहु, पान पसलका साहु, लागुऔषध कारोबारी रहेको बताइएको छ ।
राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा विष सेवन गरी उपचारका लागि भर्ना भएका लौनियाका ५० वर्षीय पुरुषमा गत साउन ९ गते कोरोना भेटिएको थियो । उनकै सम्पर्क ट्रयाकिङ र ट्रेसिङ गर्दा आइतबार समुदायका २५ जनामा संक्रमण पाइएको हो ।
यस्तै, राजविराज नगरमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा वडा नं. ७ स्थित गुद्री हटिया र वडा नं. ६ सिरहारोड अनिश्चितकालको लागि प्रवेशमा निषेध गरिएको छ ।
जिल्लामा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ५२४ पुगिसकेको छ । नगरमा पनि संक्रमितको संख्या थपिँदैगएपछि राजविराज नगरपालिकाले गत ७ गते लकडाउन र जिल्ला सुरक्षा समिति सप्तरीले गत ८ गतेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लागू गरेको छ ।
यस्तै, जिल्लाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी खडक, डाकनेश्वरी, बोदे बर्साइन, हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका, कृष्णसवरण, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकालगायतले पनि लकडाउन घोषणा गरेका छन् ।